Dawladda Sucuudiga Oo 100 Milyan Ugu Deeqday Dalka Suuriya – somalilandtoday.com
Dawladda Sucuudiga Oo 100 Milyan Ugu Deeqday Dalka Suuriya
(SLT-Riyadh)-Dowladda Sucuudiga ayaa sheegtay in ay 100 milyan oo doollar ugu yabooheyso dib u dhiska qeybo ka mid ah dalka Suuriya, gaar ahaanna woqooyiga dalkaasi oo kal hore laga qabsaday mintididinta kooxda Dowladda Islaamka.
Lacagtan uu Sucuudiga ku yaboohay ayaa la doonayaa in dib loogu soo celiyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee gobolkaasi oo ay hadda maamulaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta u badan ee uu Mareykanka taageero.
Deegaanada lacagta Sucuudiga ka faa’iideysan doono waxaa ka mid ah magaalada Raqa oo ku burburtay dagaalkii looga xoreynayay kooxda Daacish.
Mareykanka ayaa soo dhaweeyay yabooha Sucuudiga waxa uuna sheegay in xasilinta gobolkaasi ay muhiim u tahay in kooxda Daacish aysan mar kale ku soo laaban gobolka. Dowladda madaxweyne Bashar Al-Asad ee Suuriya wali kama aysan hadlin yaboohaasi Sucuudiga.
Dowladda Sucuudiga iyo waddamo kale oo Carbeed ayaa taageerayay kooxaha kacdoon wadeyaasha ahi ee doonayay in ay ka takhluusaan dowladda madaxweyne Asad. Balse dowladaha Iiraan iyo Ruushka ayaa garab istaagay dowladda Suuriya.
Dalka Turkiga oo dowladda Ruushka aad ugu dhow, hadda uu muran kala dhaxeeyo Mareykanka ayaa kal hore ku gacan seyray taageerada Mareykanka ee maleeshiyaadka Kurdiyiinta.
Dowladda Turkiga ayaa Kurdiyiintani u aragta urur argagixiso, waxaana madaxweynaha Turkiga uu dhawr jeer oo hore uu ballanqaaday in uu weerarayo.
Dowladda Suuriya ayaa iyaduna xilligaasi qorshahan ku tilmaamtay weerar qaawan oo lagu soo qaaday dalkeeda, halka dowladda Ruushka ay ka digtay cawaaqib xumada ka dhalan karta taageerada Mareykanka ee maleeshiyaadkaasi oo gaaraya ilaa 30,000 oo askari. Balse si xiisadda loo yareeyo ayaa Mareykanka waxa uu ku amray maleeshiyaadkani in ay ka baxaan magaalooyinka uu Turkiga dalbaday in ay isaga baxaan sida Manji boo kale.
Bishii Oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ayaa gacan ku haynta magaalada Raqa waxaa la wareegay maleeshiyaadka Kurdiyiinta, kuwaasi oo wixii intaasi ka dambeeyay isa sii balaarinayay.
Yabooha Sucuudiga ayaa ku soo beegmaya xilli muran xooggan uu hadda ka dhex taagan yahay Mareykanka iyo Turkiga.
Mareykanka ayaa maanta ku hanjabay in xayiraado dhaqaale uu ku soo rogayo dalka Turkiga sababo la xiriira diidmada Turkiga ee ah in uu xabsiga ka sii daayo baadari Mareykan ah oo u xiran dowladda Turkiga.